Sawirro: Axmed Madoobe oo kulan deg deg ah isugu yeeray golihiisa wasiirrada. - XAL DOON
Home NEWS Sawirro: Axmed Madoobe oo kulan deg deg ah isugu yeeray golihiisa wasiirrada.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa xalay shir gudoomiyay kulan aan caadi ahayn oo ay isugu yimaadeen golaha wasiirrada Jubaland.
Ajaanib ka tirsan Daacish oo lagu qabtay Puntland.
Ra’iisul wasaaraha magacaaban oo maanta hortagaya Baarlamaanka.
Prime Minister Mohamed H. Roble was seriously underestimated by friends and foes alike.
Imaaraadka oo Soomaaliya u balanqaaday taageero buuxda.
Dalka xiga ee uu Xasan Sheekh ku wajahan yahay kadib Imaaraadka Carabta.